Rikoooo A380 shil dhacay P3D v3.4
Rikoooo A380 shil dhacay P3D v3.4 sano 3 2 bilood ka hor #572
Waxaan dhib ku qabaa Rikoooo A380. Nasiib darrose, markaan dhaqaaqo kaameeradda si dhaqso leh, P3D joojiya jawaabta. Taasi kuma dhacdo diyaarado kale. Qof kale oo dhibaatadan haysta?
Rikoooo A380 shil dhacay P3D v3.4 sano 3 2 bilood ka hor #579
Anigu kuma dhicin duulaan xagga Eebbe ah oo garanaya ilaa intee le'eg, sidaa darteed anigu ma awoodo inaan waxbadan ka caawiyo arintaas. Waxaan rajeynayaa in qof uu la yimaado taas. Nidaamka lagu daray Nidaamkeygu uma muuqdo runtii inuu jecel yahay P3D lol